warkii.com » Waa kuma filim sameeyaha difaacay jilaayaasha Bollywood-ka kusoo galay is-qaraabeysiga?
Waa kuma filim sameeyaha difaacay jilaayaasha Bollywood-ka kusoo galay is-qaraabeysiga?
Nidaamka is qaraabeysiga ayaa muddooyinkii dambe ahaa cinwaannada ugu badan ee dhaliya doodaha gudaha shirkadda Bollywood-ka, waxaana soo billaabay bannaan dhigiddeeda atariishada ad-adag ee Kangana Ranaut oo ka qayb galeysay barnaamujka Koffee with Karan oo uu daadiyaha ka yahay Karan Johar.
Tan iyo markaas waxaa caadi noqotay in laga doodo nidaamka is qaraabeysiga ee ay jilaayaasha dhallinyarada ah kusoo galaan filimada iyagoo kaashanaya magaca waalidkooda ama qof ehel u ah oo kaga soo horreeyay Bollywood-ka.
Kaddib geeridii Sushant Singh Rajput, waxaa weerarro faro badan baraha bulshada kala kulmay jilaayaal ay ka mid yihiin Alia Bhatt, Sonam Kapoor, Ananya Panday iyo xiddigo kale, kuwaasoo lagu tilmaamayo inay gacan qabad iyo buunbuunin ay ku heleen magaca iyo maqaamka waalidkood.
Filim sameeyaha lagu magacaabo R Balki ayaa difaacay xiddigaha ay dhaleen jilaayaal hore, isagoo ka hadlayay nidaamka is-qaraabeysiga.
R Balki ayaa hoosta ka xarriiqay inaysan kaliya Bollywood-ka ka jirin is-qaraabeysiga iyo dhaxaltooyada, ee uu ka jiro ganacsi walba, sidaasna ay caadi ku noqotay in caruurta ay waalidkood ka dhaxlaan xirfadda.
Waxa uu tusaale u soo qaatay ganacsiyo caan ah sida Mahindra, Ambani iyo Bajaj, kuwaasoo dadka iska leh ay ka dhaxleen waalidiintoodii geeriyooday.
“Su’aasha waxay tahay in jilaayaasha ay dhaleen xiddigihii hore ay heystaan faa’ido ka badan kuwa kale?, Haa wey heystaan, waxaana barbar socda faa’ido darrooyin” ayuu yiri R Balki.
“Su’aal fudud ayaan idin weydiin laha: Ii keen jilaa ka wanaagsan Alia Bhatt iyo Ranbir Kapoor, kaddib weynu doodeynaa” ayuu hadalkiisa ku daray filim sameeyahan.
R Balki ayaa dhinaca kale sheegay inuu ka niyad jabsan yahay in Alia lagu weeraro maadaama ay tahay Mahesh Bhatt gabadhiisa, balse dadku ay arki waayaan iyada shaqadeeda.